आखिर के भयो ? प्रचण्डले गरिदिए आफ्नै नेता कार्यकर्तालाइ चकित पार्ने यस्तो घोषणा – Khabar Patrika Np
आखिर के भयो ? प्रचण्डले गरिदिए आफ्नै नेता कार्यकर्तालाइ चकित पार्ने यस्तो घोषणा
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: २३:२५:५५
काठमाडौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब काठमाडौ बाहिर शक्ति निर्माणको काममा लाग्ने बताएका छन् । शुक्रवार वुटवल पुगेका उनी आफ्ना पुराना साथीलाई विर्सेर रामबहादुर थापा (वादल), टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेतालाई समेट्दा यस्तो अवस्था आएको भन्दै प’छुताएका छन् ।
अप्ठेरो अवस्थामा केपी ओलीतर्फ लागेर आफुलाई धो का दिएका नेताहरुलाई सहयोग गरेर आफूले गल्ति गरेको बताएका छन्।
आफूलाई वास्तवमा सहयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता भुलेर अरुलाई साथ दिँदा अहिले उनीहरुबाट आफैलाई धो का भएको स्मरण गर्दै उनी पछुताएका छन् । ‘त्यत्रो बदमाशी गरेकालाई गृहमन्त्री बनाएर पठाए, उनले भने टोपबहादुर रायमाझीबाट पनि त्यस्तै धो का पाएँ ।
‘बाबुरामजीसँग वैचारिक सं घ र्ष हुँदा जे होस् टोपबहादुर (रायमाझी) ले साथै दिए भनेर लगेको, सहयोग गर्ने भनेको त यो गरिदिए,’ प्रचण्डले सोहि भेलामा भने, ‘अरु त अरु त्यो एकजना न केहि बुझेको छ, न केहि छ, स्थायी समिति सदस्य बनाइदिएको अहिले मन्त्री’
बाबुरामलाई अलग हुन दिनुमा आफुवाट ठूलो भु ल भएको मान्दै उनी पछु’ताएको मान्न सकिन्छ । त्यस्तालाई भन्दा त प्रचण्ड बनाउन भनेर दृढताका साथ लागेका आफ्नै साथीहरुलाई गरेको भए त यो दिन त देख्न पर्दैनथ्यो भन्ने महशुस मलाई भएको छ,’ उनले भने।
त्यसैले अहिले ओलीतर्फ गएका माओवादी नेताहरुलाई आफु फकाउन पनि नगएको उनले बताए। आफूले त्यस्ता नेताहरुलाई फर्काएर पार्टीभित्र फेरि भाँ ड भै लो गराउन नचाहेको उनको तर्क छ। प्रचण्डले आफूले अरुलाई सहयोग गर्दा आफ्ना वास्तविक साथीहरु अन्याय परेको हुँदा त्यस्ता नेताहरुलाई फकाउन नलागेको प्रष्ट्याए।
त्यस्तै प्रचण्डले जिल्लाहरूमा नेता/कार्यकर्ताका गतिविधिले केन्द्रमा नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालहरूलाई पिन्च पर्न नहुने बताएका छन्। पूर्वएमालेसँग सम्बन्धित नेता/कार्यकर्ताले पनि हेडक्वाटरलाई जानकारी गराएर मात्रै पार्टीमा फर्कने वा नफर्कने भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्ने र आफूखुसी निर्णय नगर्न प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्।
‘जिल्लाका हाम्रा कुनै पनि गतिविधिहरूले केन्द्रमा माधवजीहरूलाई पिन्च नहोस्,’ उनले भने। एमाले अब एक रहने स्थिति नरहेको उनले दाबी गरे। ‘एमाले त्यही रूपमा एक रहने स्थिति नै छैन,’ उनले भने।
‘माधवजीसँग नजिक भएका मानिसलाई तानेर हामीभित्र घुसाइहाल्छु भन्नेतिर नलाग्नुहोला,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले त्यसो गर्न आवश्यक छैन। माधवजी, झलनाथजीहरूसँग हाम्रो सहकार्य गरिराख्ने, उहाँहरूले त्यहाँभित्र गएर संघर्ष गर्ने र फेरि एकताको प्रस्ताव राख्ने र एकतातिर नै जानुपर्छ भन्ने छ।’
संसद विघटन र संविधान खारेज गर्ने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय संघर्षबाट जितेको उनले बताएका छन्। तर प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र जारी रहेको उनको भनाइ छ।